နိုဝင်ဘာလ 21, 2017
ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှု.dubaicitycompany.com / tag / mobile-phone-recruitment / "> လက်ကိုင်ဖုန်းခေါ်ယူခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်
ဒူဘိုင်းအတွက်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထဲမှာကြီးထွားဆီသို့ဦးတည်ရှေ့ဆက်မယ့်ခြေလှမ်းကြာ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ပင်လယ်ကွေ့တွင်စုဆောင်းမှုစျေးကွက်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်ကစုဆောင်းမှု tools တွေကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် 2009 ကတည်းကနှင့် correspondingly မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, ကောင်းစွာယူအေအီးအတွက်သိဖြစ်လာစည်းစိမ်ချမ်းသာကုမ္ပဏီသော့ချက် မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုဈေးကွက်ထဲမှာ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီးအခုတော့ကျွမ်းကျင်သူများ။ ဥပမာအားဖြင့်, ၏ 80% ကျော် အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများ မိုဘိုင်းကျော်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများသာမိုဘိုင်းကျော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Google ကအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ပေမယ့် မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှု ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ အတိအကျ 2019 နှင့် 2020 အတွင်းပိုပြီးလူကြိုက်များသည့်စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်လာ.
ဒီအတွက်ကြောင့်, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်းယခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ၎င်း၏အသစ်ကဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များမှရွေ့လျားနေသည်။ Marina လမ်းနှင့် Deira-ဒူဘိုင်းမှာဦးခေါင်းရုံးများ၏တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အများဆုံး။ ဖြောင့်သူတို့ရဲ့အီးမေးလ် box ကိုမှ CV ကိုလက်ခံရရှိရန်ဂျီမေးလ်ကဲ့သို့မိုဘိုင်းဖုန်း app များကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုနေ့တိုင်းမြင့်တက်နေသည်။ ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများအားဖုန်းများအသုံးပြုနေသည် အကောင်းဆုံးကိုမွို့၌အသစ်သောဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များစုဆောင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ။
တစ်ခုလုံး ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအတွက်ပြပွဲငှားရမ်း။ ကံမကောင်းစွာသင်တို့အဘို့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာကသင်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့် တစ်ဦးချင်းစီအနေအထားအဘို့အမြင့်မားသောအရည်အချင်းများ။ ဒါပေါ့, သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အရှာတှေ့နိုငျ ဒီထက်အတှေ့အကွုံနှငျ့အတူ။ သို့သော်မလုပ်ခဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအကွောငျးကိုအိပ်မက်နေကြသည်။
နိမ့်ဆုံးအတွေ့အကြုံ ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းထားခံရဖို့ အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏ 2-3 နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်သေချာတွင် သငျသညျပါကစ္စတန်ကနေဒူဘိုင်းမှစုဆောင်းရနိုင်။ ထိုအခါနိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းကငှားရမ်းထားခြင်းကို ပင်လယ်ကွေ့တွင်ငှားရမ်းသူ။ ယခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုစုဆောင်း။ နောက်ထပ်ဥပမာဖြစ်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလျက်နေသောတောင်အာဖရိကကျွမ်းကျင်သူများ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုစော်ဘွားအတွက်ငှားရမ်းထားနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းရှိအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ် ?. နိမ့်ဆုံးအတွေ့အကြုံမရှိရင် သင်ပင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်လို့မရပါဘူး။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ န်ထမ်းလည်းပြည်ပမှာအလုပ်ကျော်လာကူညီပေးနေ။ ပိုပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အကိုင်အက္ခရာများရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းအုပ်စုများ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနှင့်အတူတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်။ အထူးသဖြင့်ဒေသခံငှားရမ်းကုမ္ပဏီများအတွက်။ သင်ဆဲနိုင် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာပါ။ သို့သော်အရာများအတွက်, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် မြင့်မားအဆင့်မှာလျှောက်လွှာ.
အဆိုပါ မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ ယူအေအီးအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းငှားရမ်းဈေးကွက်ထဲမှာကုမ္ပဏီ။ စုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းများသုံးပြီးနှင့်အကောင်းဆုံး။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အထဲကရှာတွေ့ချင်ပါတယ်လျှင် ဘယ်လိုတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ အထူးသဖြင့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုသင်အလုပ်အကိုင်အဘို့မြေကိုကူညီဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှု ကြီးထွားလာနေသည် ယူအေအီး၌မသာ ဒါပေမယ့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။
ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစွာ operated ပထမဦးဆုံးသာမိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ စော်ဘွားအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ရှိသမျှတို့ကိုမျိုးကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ အထင်ကြီးဖို့မွေးညှင်းထကြ၏သူတို့သည်အထူးသဖြင့် စံအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ နှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ကျနော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒူဘိုင်းတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံတွေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်အခြားသူများကိုကူညီခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ယူအေအီးများအတွက်ကြီးမားသော WhatsApp ကိုအဖွဲ့များပွုပါပွီ။ အဲဒီမှာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအကူအညီရှာကြံအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ.
ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောသစ်ကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေသည် ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများအုပ်စုများအတွက် WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာ။ နှင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဲဒီမှာအလုပ်အကိုင်အတက်ရှာဖွေတာနှင့်အတူ။ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု ဒူဘိုင်း 2020 မှရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေသည်.
ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ် ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းကိုအမြန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ ရာခိုင်နှုန်း 70 ကျော်ကဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ သူတို့အလုပ်သူတို့ရှာဖွေရေးအတွက်နေ့စဉ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်း။ ဟုဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ န်ထမ်းများ၏ရာခိုင်နှုန်း 81 ထက်ပိုအလုပျအတှကျသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုပါ။ "ဟုအဆိုပါစကားလုံးဆံ့ကြောင်းအလုပ်-ရှာကြံအမှုဆောင်အရာရှိရှာဖွေမှုများကိုရာခိုင်နှုန်း 23 ကျော်အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း"မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်ကုန်မှလာကြ၏။
ဘို့ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုရှာဖွေမှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူတွေရှာဖွေနေသည် ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်ဖုန်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် တတ်နိုင်သမျှကြောင်းအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်ပြည်တော်ပြန်အများစု။ Google သို့မဟုတ် Bing မှသွားစာပိုဒ်တိုများစာရိုက်နှင့်၎င်းတို့၏ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအဖြေကိုလက်ခံရရှိရန်ကြိုးစားနေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမေးမြန်းချက်.
ဥပမာအားဖြင့်, တောင်သူတို့ရှာဖွေနေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်းသူ။ ရုံကစူပါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စူပါလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်ငှားရမ်းထားခြင်းကိုခံရစေရန်။ ၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲသူကလူအဘို့ဖြစ်၏ကြောင်းအားလုံး အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ၏ပစ်မှတ်။ ယင်းဟာ android ကျော်ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းထားခံရဖို့အများကြီးပိုမြန်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူလူအခုသူတို့ကမိုဘိုင်းအသုံးပြုနေသည်လက်တော့ပ်ကိုအသုံးပြုပြီးရပ်တန့်။ တဦးတည်းအရာများအတွက်, app တစ်ခုစတင်မယ့်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် desktop ကိုစတင်ထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အနာဂတ်.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာကြံကြသူဒေသခံပြည်သူများ၏။ အခုတော့အလုပ်များတစ်လမ်းရှိပါတယ် အွန်လိုင်းနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေရန်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအကောင့်ကိုမိုဘိုင်း app များကိုဒေါင်းလုဒ်သတိပေးချက်များထ setting ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ ထိုအခါဥပမာ, linkedin သို့မဟုတ် Bayt အဘို့, ကောင်းသောလူမှုရေးအကောင့်ကို set up ဖို့ကြိုးစားနေ။ နှင့် အလုပ်အကိုင်ရွေ့လျားနေသောအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်သေတ္တာသို့။
မိုဘိုင်းဖုန်းများယခုအသုံးပြုကြသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနီးပါးမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးလူဦးရေ၏ 95 ကျော်% ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသစ်ရှာဖွေမှုများကိုအကြောင်းကိုလာမထိတ်လန့်ရှိ အသစ်ကနိုင်ငံတကာပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပြည်တော်ပြန်ကနေ။ သင်တို့သည်လည်းအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင့်မိုဘိုင်းကျော်။
သိမှတ်ကြလော့ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘယ်လိုစတင်သလဲ. 2018 နှင့် 2019 အတွက်အောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, မိုဘိုင်းနေရာလွတ်ရှာဖွေနေအတူ။ အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့လူမျိုးအုပ်စုများအထောကျအကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်နေကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောဧည့်သည်များသူတို့တစ်တွေ CV ကိုတင်ပြသင့်တယ်အတိအကျဘယ်မှာငါသိ၏။ ထိုမှတပါး, ဘယ်လိုပိုပြီးတိုက်ရိုက်နေရာလွတ်လျှောက်ထားရ WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှတစ်ခုချင်းစီမှ post ကိုအာရုံစိုက်ဖို့။ အထူးသဖြင့်ဒေသခံများထံမှ ငှားရမ်းသူကုမ္ပဏီများမှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘယျသို့ရဲ့ App ကိုအုပ်စုများအပေါ်။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, သငျသညျမွငျ့မား rated မိုဘိုင်း app များကိုရှာဖွေနေ start သငျ့သညျ။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံကိုအောင်၏ရည်ရွယ်ချက် ပိုပြီးလုံလောက်သောမိုဘိုင်း။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် fပထမဦးဆုံးကဤအနည်းငယ်သောဒေသများတွင်အပေါ် ocus ။ ဥပမာအားဖြင့်, အများအပြားရှိပါတယ် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမိုဘိုင်း apps များ။ နှင့်ကျိန်းသေ, သောသင်အများကြီးပိုမြန်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
2019 အတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီး WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု စုဆောင်းမှုစျေးကွက်အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများလိုအပ် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆန်းသစ်မဟာဗျူဟာများ ပင်လယ်ကွေ့များအတွက် Whatsapp စုဆောင်းမှုမိုဘိုင်း tools များ နိုင်ငံများ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်ကောင်းသောလူမှုရေးထိတွေ့မှုရှိခြင်းလျှင်။ သင်ကယူအေအီးအတွက်အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့သွားကြပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းတွင်သာမိုဘိုငျးဖုနျးစုဆောင်းမှုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အဘို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကြောင့်, 75% အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကျော် Google ကဖုန်းကို အသုံးပြု. application များပို့ပေးရန်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သစ်ကိုငှားရမ်းကုမ္ပဏီများယှဉ်ပြိုင်မှုကနေထွက်ရပ်တယ်။ သာသူတို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်နှင့်နေဖြင့် အသစ်ကမိုဘိုင်း app အသုံးပြုသူများနှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကူညီပေးနေ။ 2015 ကတည်းက WhatsApp ကို 1Bilion အသုံးပြုသူများကိုကျော်ဖို့စိုက်ပျိုးထားပါတယ်အခါနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိန်ထမ်းများထဲကရှိသမျှနှစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေ အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသစ်ကို WhatsApp ကိုအဖွဲ့များနှင့်အတူစတင်ဖြစ်စဉ်ကိုကတည်းက။ စံစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရန်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများကသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုဖွင့် နှောင့်နှေးအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုငှားရမ်းခံရဖို့ကူညီခြင်းမရှိဘဲ။ တစ်ဦးကအများကြီးပိုမြန်ဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းကျော်။ ဟုတ်ပါတယ်, ရှေ့ဆက်မျှသာရွှေ့ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိနေဆဲရှိပါတယ် WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့အဖွဲ့ကကျိန်းသေနေ့နှင့်ညဉ့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ကတိပေး သငျသညျငှားရမ်းထားရ.
ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ဒူဘိုင်းအသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းချစ်ကြတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ထပြောင်းရွှေ့ပြီသာဖုန်းကိုစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Facebook နှင့် LinkedIn အဖြစ်အကြီးမားဆုံးအလုပ်ပေါ်တယ် Bayt Airway အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်စုဆောင်းမှုပြေး။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များအားလုံးကိုအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်နေရာလွတ် ကဒူဘိုင်းတစ်ဦးအကြီးအလွတ်ဖြစ်၏။ ဒါပေါ့, ယူအေအီးကျွမ်းကျင်သူများအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းပါ။ အထူးသဖြင့်လာသောအခါတောင်ပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ စျေးကွက်ဝင်တိုက်.
သင်လက်ရှိဆိုရင် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့သင်၏ CV ပို့စ်တင် သင့်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်း device ပေါ်မှာ။ အမြဲတမ်းကအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုသေချာပါစေ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကနေရှိသည်ကဲ့သို့အတွေ့အကြုံကဘာလဲ ?. သငျသညျလျင်မြန်စွာသင်လိုအပ်သောအရာကိုရှာတွေ့နိုင်သလော။ သင်၌အလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဟန်ပါနဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပစ်မှတ်ထား နှင့်အလုပ်သမားအမျိုးအစားကိုသငျသညျသစ်ကိုအိပ်မက်လွတ်ဘို့အရည်အချင်းပြည့်အလုံအလောက်နေ ?. အဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုဖတ်ရှုစောင့်ရှောက်.
နှိုင်းယှဉ်အခြားကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတခု အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ။ ထိုသူတို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ငါတို့မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအုပျစုမြား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဒီမှာပါ သူတို့ကိုအခမဲ့သစ်ကိုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များစုဆောင်း။ အပြုသဘောဘက်တွင်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌အကြှနျုပျတို့၏အခိုငျအမာ ပို. ပို. လည်းအနည်းငယ်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းကိုလမ်းကြောင်းများ။ 2016 ကတည်းက ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပြည်တော်ပြန်များအတွက်အလားအလာထိရသေးသောစုဆောင်းမှုအခွင့်အလမ်းအရွက်ဘယ်တော့မှ။ ယခုမှာအပင်စုဆောင်း ဒူဘိုင်းအတွက် Philipino အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကျော်မန်နေဂျာငှားရမ်းရောက်ရန်အသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကူညီပေးနေ ပင်လယ်ကွေ့တွင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကူညီပေးနေ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်ရှာဖွေသူများ လက်ရှိအလုပ်ရရန်ရေပန်းအစားဆုံး app ကို, WhatsApp ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်သူတို့ကိုပညာပေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်၏စကားပြော ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေအလုပ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူပညာပေး၏ရည်ရွယ်ချက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒူဘိုင်း၌ရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်စုဆောင်းရွေးချယ်စရာဖေါ်ပြခြင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့သည်လည်းပညာပေး အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများအမြိုးသမီးတကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ကျော်။ ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်ရှင်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လိုရိုးရိုး ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ WhatsApp ကိုအုပျစုမြားကို အသုံးပြု.။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ သငျသညျ LinkedIn အပေါ်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောအချက်အလက်များကိုပိုမိုအပိုင်းပိုင်းရနိုင် အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လမ်းလျှောက် ယူအေအီးအလုပ်အကိုင်များသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့ကအမြဲသင်စော်ဘွားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လမ်းစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့တိုင်းဖြစ်နိုင်သောလမ်းကိုတက်ကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
သို့မဟုတ်ပင်ထွက်ရှာတွေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်ဟိုတယ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီစာမျက်နှာ browsing နေစဉ်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှရှိပါသည်။ သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနိုင်သည်အားလုံးသည်သင်တိုက်ရိုက်တန်ဖိုးရှိသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်စူပါ ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းနှင့် Anu ဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အအုပ်စုများအဖြစ်မတ်နည်းလမ်းများ။ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအသစ်သောအလုပ်အကိုင်အမုဆိုးသည်။ အထူးသဖြင့်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဖြစ်အိန္ဒိယနှင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများအတွက် အဘယ်သူသည်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရချင်ပါတယ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်စျေးကွက်။ မြေတပြင်လုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းစုဆောင်းမှုစျေးကွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုစနစ်။ ဒါကလည်းပါဝင်သည် အလုပ်အတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှ။ ထိုအပင်ကာတာနိုင်ငံမိုဘိုင်းဖုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လမ်းပေါ်နေသောကြီးမားဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း။
ကျနော်တို့မှာလည်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဦးဆောင်အလုပ် site ကို။ ကျနော်တို့က "အခွက်အဘို့အရှာဖွေရေး" ကိုပိုပြီးအဖိုးတန်စေသည်ရှာဖွေစုဆောင်းကူညီဖို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြသည်။ ဤအချက်များပေးထား, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များကိုမကြော်ငြာအလုပ်အကိုင်များကိုမှန်ကန်စွာကမ်းလှမ်းသိကြ.
ဒီရက်ကနေပြီသွားကြောင်းဖြစ်ပါသည် စူပါ paid အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေ ရက်အနည်းငယ်၌တည်၏။ ထို့အပွငျက 1 တစ်နှစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်ယူအေအီးအတွက်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်ရှာတွေ့မှမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ သငျသညျအသီးအသီးအလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအပေါ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အလုပ်တွင်ကျယ်စွာနှင့်အလုပ်အကိုင်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ 50k ကျော်နှင့်အတူပင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။
ငါတို့ကဲ့သို့ 2009 ကတည်းကဒူဘိုင်းငှားရမ်းစျေးကွက်စစ်ဆေးနေ။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေရှာဖွေနေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုငှားရမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ထိုအခါနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှရှိဝန်ထမ်းများအရည်အချင်းပြည့်မီ။ ကျိန်းသေ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများ။ ယူနိုက်တက် Atab စော်ဘွားနီးပါးမည်သည့်ကဏ္ဍများတွင်အသုံးချခံရဖို့အပူတပြင်းဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွက် ဒူဘိုင်းယူအေအီးမှာပိုအလုပ်ရှာဖွေသူများတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်နေရာဖို့ကြိုးစားနေ။ မိုဘိုင်းအတွက်ယူအေအီးအတွက်အကြီးမားဆုံးလမ်းကြောင်းသစ် WhatsApp ကိုကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ကျနော်တို့အသစ်ကနိုင်ငံတကာရဖို့ကအသုံးပြုနေသည် 2018 အတွက်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ နယူးအောက်ပါနှစ်အတွင်းနှင့်ကျိန်းသေလာသစ်စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 2019 နှင့် 2020 ရှေ့ဆက်ရွေ့လျား။ အသစ် ကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အများကြီးပိုစုဆောင်းမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်.
အဆိုပါစမတ်ဖုန်း ပို. ပို. ဒါကြောင့်သင်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့စုဆောင်းရေး tool ကိုဖြစ်လာနေသည်။ ကျိန်းသေ, သင်မလိုအပ်ပါဘူး အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေဒူဘိုင်း၏နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သငျသညျရှာဖွေနေကြဘူးနေချိန်မှာလက်ကူညီပေးနေ။ ဒူဘိုင်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေအလုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ် Log သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းဘလော့ post ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ သင်ပိုမိုပင်အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းတွင်ဆရာအလုပ်အကိုင်များ နှင့်အပေါငျးတို့သတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု ဒူဘိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်နှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။
အသစ်အဆိုပါနေရာလွတ်တစ်ခုမှာ အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုဧည့်သည်ဒူဘိုင်းအတွက် Automotive အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေကြပါတယ်။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့အတွင်းကျော်ကြားသောအလုပ်အကိုင်များအချို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်း Porsche တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဒီကားကိုမောင်း။ တစ်ဦးဧည့်သည်များအတွက်အိပ်မက်နှင့်ယခုငှားရမ်းထားပါသည်, ဤအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ သင်အလွယ်တကူတစ်ဦးအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည် အရောင်းအတိုင်ပင်ခံ, တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာသို့မဟုတ်ပင်ဒီကုမ္ပဏီဧညျ့ကွိုသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာကျနော်တို့အကျော်ကြားဆုံးဖော်ပြထားခြင်းရန်လိုအပ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်, သင်သည်စော်ဘွားအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်စတင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည် သငျသညျအစဉျအမွဲယူအေအီးအတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါကြောင့်အဆုံး၌, ငါတို့နှင့်သင်တို့ကိုအကောင်းကံဆန္ဒရှိ သင့်ရဲ့နေရာလွတ်သုတေသန။ ကျနော်တို့စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုငါတို့သိအားလုံးဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြမျှော်လင့်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကြံပေးသောအရာကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုတစျဦးဖွစျသညျ ဒူဘိုင်းရှိ Careerjet အလုပ်ရှာဖွေနေကုမ္ပဏီ နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ Monster ပင်လယ်ကွေ့က်ဘ်ဆိုက်အဘို့ကောင်းသော။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကပူးတွဲလုပ်ကိုင်ရန်စတင်သင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်နှင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။